Ahụmahụ Oxiracetam: Kedu ka ntụ ntụ Oxiracetam si eme ka m nwee mmetụta?
Gịnị bụ Oxiracetam?
Oxiracetam bụ otu n'ime ndị okenye nootropic Mmeju site na ezinụlọ racetam. Ọ bụ nke atọ racetam compound mgbe piracetam na aniracetam na mbụ e mepụtara na 1970s. Oxiracetam bụ kemịkalụ kemịkalụ nke racetam mbụ, piracetam.
Dị ka racetams ndị ọzọ, oxiracetam nwere pyrrolidone na isi ya. Otú ọ dị, oxiracetam nwere ìgwè hydroxyl, nke mere na ọ dị ike karịa ngwakọta nke nne na nna ya, piracetam.
A maara ya nke ọma maka ikike ya iji melite ọrụ ọgụgụ isi dị ka ebe nchekwa, ilekwasị anya na mmụta yana mmetụta mkpali ọ na-enye. Oxiracetam nootropics n'ozuzu na-eme ka ahụ ike ụbụrụ gị dum dịrị.
Oxiracetam ntụ ntụ: Gini ka eji eme ihe eji eme ihe?
E nwere ọtụtụ dịgasị iche iche nke oxiracetam eji kọọrọ ndị nyocha yana ahụmịhe oxiracetam kesara na nyiwe dị iche iche.
A na-eji Oxiracetam, dịka ọ bụla racetam ọ bụla, iji mee ka cognition nwekwuo ike site na ime ka ikike ịmepụta oge dị mkpirikpi na ogologo oge. N'ihi ya, onye ọ bụla chọrọ ịmụta na icheta ozi na-eji ya. Ọ magburu onwe ya maka ụmụ akwụkwọ ndị kwesịrị ịme nke ọma n'ule ha, n'ihi na ọ ga-arụ nnukwu ọrụ iji nyere ha aka ịmụ ma cheta ihe dị mfe. Ọ na-enyere ha aka itinye uche ha na itinye uche ha ogologo oge.
Oxiracetam na-eji pụrụ iche n'ihi na ọ na-enye mmụgharị mmụba ma na-akpali uche gị ka ị lekwasị anya ma mụrụ anya. Ihe kachasị mma banyere mmetụta ya na-akpali akpali bụ na n'adịghị ka ndị ọzọ na-akpali akpali nke na-eme ka mmadụ nwee mmetụta na-adịghị mma ma na-enweghị ike izu ike, oxiracetam ga-akpali uche ma hapụ gị ka ị dị jụụ ma zuru ike. Maka ndị ọrụ chọrọ mkpa na itinye uche n'eziokwu, enwere ike ịgbagha ahụmahụ oxiracetam.
Nnyocha na-egosikwa na oxiracetam na-eji ya na ịgwọ ịda mbà n'obi gụnyere nkwụsị ncheta na ndị ọrịa nwere nsogbu Alzheimer site n'inye nchebe nchebe.
Dịka ọmụmaatụ, otu na-akwadebe maka ajụjụ ọnụ, ọ ga-adị mkpa iyi onye nwere ọgụgụ isi. Oxiracetam na-eme ka okwu ire okwu dị mma nke na-enyere ndị mmadụ aka iji okwu zuru oke nke na-eme ka ohere ha nwere ịdata ọrụ nrọ ha.
Oxiracetam ntụ ntụ bụkwa nhọrọ maka meziwanye ebe nchekwa na ndị agadi na-enwekarị ncheta ma ọ bụ daa mbà.
Ebe ọ bụ na ahụ anyị anaghị emepụta oxiracetam n'onwe ha, iji nweta uru ndị ahụ e kwuru na oxiracetam, ị ga-atụle oxiracetam zụta n'aka ndị na-ere ahịa tụkwasịrị obi. ?????
Imirikiti nyocha mmadụ dabere na ndị agadi na ndị isi na-adịghị mma, yabụ nyocha ọzọ banyere ndị ahụike ga-adị mkpa iji gosipụta ojiji oxiracetam. Otú ọ dị, nyocha onwe onye nke oxiracetam na-egosi ikike nke oxiracetam na ahụike na ndị na-eto eto.
Oxiracetam: Kedu ka O si arụ ọrụ?
Mgbe, oxiracetam uru na-ọma maara na usoro nke omume site na ọ na-arụ ọrụ bụ ka a ga-akọwa n'ụzọ doro anya. Otú ọ dị, a na-akọ ọtụtụ ụdị ọrụ oxiracetam.
N'okpuru bụ ụfọdụ n'ime oxiracetam usoro nke emereme;
i. Na-achịkwa neurotransmitter, acetylcholine
Ndị neurotransmitters abụọ a na-arụ ọrụ dị oke mkpa n'ikike anyị nwere iji mepụta ncheta oge dị mkpirikpi na ogologo oge, mmụta na arụmọrụ zuru oke.
Oxiracetam na-emetụta usoro cholinergic na glutamate si otú a na-agbanwe mwepụta nke ndị a dị mkpa, acetylcholine ACh na glutamate.
Kpọmkwem, oxiracetam na-eme ka uche nke ndị na-anabata acetylcholine. Ọ na-eme nke a site na imezi protein kinase C (PKC) enzyme nke na-emetụta M1 acetylcholine ndị natara.
Oxiracetam nootropic na-egosikwa na ọ ga-enwe ike ịrụzi ndị nabatara ihe mebiri emebi wee si otú a mee ka ọkwa dị elu nke ACh jikọtara ya na ọrụ ọgụgụ isi.
ii. Njirimara ihe na-akpali akpali
Oxiracetam nootropics na-enye mmetụta dị nro na-akpali akpali na usoro ụjọ nke etiti.
Oxiracetam dara na ezinụlọ ampakine nke ogige. Ampakine mara ka egosiputa ihe na-akpali akpali. Ampakine bụ ọgwụ na-emetụta ndị na-anabata glutamatergic AMPA. Na ihu ọma, n'adịghị ka ndị ọzọ na-akpali akpali dị ka caffeine nke na-ahapụ gị ụra na ụjọ, ampakine anaghị ahapụ gị nsogbu ọ bụla.
Oxiracetam mere na-enye ihe na-akpali akpali nke na-eme ka ị mụrụ anya ma lekwasị anya mgbe ị na-ahapụ gị ka uche na ahụ dị jụụ ma nọrọ jụụ.
Na mgbakwunye, oxiracetam nwere ike ibuli ọkwa nke phosphates dị elu nke na-arụ ọrụ n'ịkwalite ume na ime ka elekwasị anya.
iii. Gbanwee usoro glutamate
Oxiracetam na-emetụta usoro glutamate ma na-emetụta ntọhapụ nke neurotransmitter, glutamate. Ọ na-enyekwu mmetụta dị ike na ogologo oge.
Glutamate bụ otu n'ime akwara ntanetị kachasị na usoro ntanetị na-ezigara ụbụrụ na ahụ dum ozi.
Glutamate na-arụ ọrụ dị oke mkpa na arụ ọrụ ọgụgụ isi yana ndị ọzọ na nchekwa na mmụta.
iv. Na-akwado nkwurịta okwu n'etiti akwara ozi
Studiesfọdụ ọmụmụ na-egosi na oxiracetam na-eme ka nkwukọrịta dị n’etiti neuron na hippocampus na-akwalite nkwalite. Hippocampus bụ akụkụ ụbụrụ nke na-emetụta ncheta, mmetụta, na usoro akwara ndị bụ isi.
Oxiracetam mezuru nke a site ụzọ abụọ. Otu bụ site na ịkpalite ntọhapụ nke acid D-aspartic na nke abụọ, site na imetụta metabolism lipid. Lipid metabolism hụ na enwere ikike ọgụgụ isi zuru oke maka akwara ozi na-arụ ọrụ.
Oxiracetam mmetụta & Uru
E nwere ọtụtụ ihe dị iche iche nke oxiracetam na-akọ na agbanyeghị na Nchịkwa nri na ọgwụ adịghị mma (FDA).
N'okpuru ebe a bụ oxiracetam uru;
i. Enhanyere ebe nchekwa na mmụta
Oxiracetam bụ ihe ama ama n'ihi ike ya iji nwekwuo ncheta. Ọ na - eme ka ihe ncheta ọhụrụ dịwanye mma yana ọ na - agbalite ọsọ ọsọ nke uche na - echetakwa ozi.
Oxiracetam na - emekwa ka ncheta dịkwuo mma site na ibelata mmebi neuron, na - edozi mkpụrụ ọgwụ metabolism na ụbụrụ, ịbawanye ọbara yana igbochi ọrụ nke astrocyte.
Ọbara dị n'ime ụbụrụ ụbụrụ dị ezigbo mkpa iji hụ na ikuku oxygen zuru oke na-abanye n'ụbụrụ maka ịrụ ọrụ nke ụbụrụ gụnyere ncheta.
Tụkwasị na nke ahụ, nrụgide oxidative nwere ike ime n'ihi ọtụtụ ihe ma ọ bụrụ na enweghị nchịkwa nwere ike ịkpata mmebi ahụ. Mgbakwunye Oxiracetam bia na nnaputa site na ime ka mmebi nke ndi ozo di.
Ọzọkwa, a na-atụ aro oxiracetam iji meziwanye ike dị ogologo oge ma eleghị anya n'ihi mmụba nke ịhapụ glutamate na-aspartic acid na hippocampus.
N'ime nnyocha nke ndị agadi 60 nwere nghọta na-atụgharị uche, a hụrụ ọgwụ oxiracetam nke 400 mg ugboro atọ kwa ụbọchị iji bulie ncheta nke ọma ma na-ebelata mgbaàmà nke ịda mbà.
N'ọmụmụ ihe ọzọ nke ndị agadi 40 nwere nkwarụ, a hụrụ oxiracetam na 2,400 mg kwa ụbọchị iji meziwanye oge dị mkpirikpi na ebe nchekwa yana okwu were were.
ii. Na-agba ume na ilekwasị anya
Mgbe ị na-eche ọrụ nke chọrọ nlebara anya zuru oke ruo ogologo oge, oxiracetam nwere ike ịbụ nhọrọ kacha mma. Ọkara ndụ Oxiracetam bụ ihe dị ka awa 8-10 ma yabụ nwere ike ịnye uru dị ogologo.
Oxiracetam nwere ike inyere gị aka itinye uche gị na ọrụ maka ogologo oge na-enweghị ịkwụsị uche na nlebara anya. Oxiracetam metụtara mmepụta ume na ụbụrụ n'ihi ya na-enye ike ọ dị mkpa iji tinye uche na ọrụ ruo ogologo oge yana ịmụtakwu ihe ọhụụ.
Oxiracetam na-enye mmetụta dị nro na-akpali akpali nke na-enyere gị aka itinye uche na-enweghị mmasị na nlebara anya.
N'ime nnwale mmadụ abụọ metụtara ndị agadi 96 nwere mgbaka na nke ọzọ metụtara mmadụ iri anọ na atọ nwere ọrụ ọgụgụ isi belatara, achọpụtara ihe mgbakwunye oxiracetam iji meziwanye oge mmeghachi omume yana nlebara anya.
iii. Mmetụta Neuroprotective
Oxiracetam emeju nwere neuroprotective uru dị ka ọ bụ ike iji chebe ụbụrụ ụdị mmebi na cognitive ojuju dị ka a n'ihi nke afọ ma ọ bụ ọbụna ụbụrụ mmerụ.
Oxiracetam nwere ike ịchebe ụbụrụ pụọ na nsogbu nke nsogbu Alzheimer kpatara yana nsogbu ndị ọzọ na-arịa ọrịa mgbaka.
Ọtụtụ anụmanụ ọmụmụ na-atụ aro na oxiracetam nwere ike nwere ike ichebe ụbụrụ site na mmebi. Dịka ọmụmaatụ, n'ọmụmụ ihe nke e webatara neurotoxins iji mebie ncheta ncheta dị ka mmerụ ahụ ụbụrụ na-ahụkarị, a chọpụtara tupu ọgwụgwọ na oxiracetam iji gbochie neurotoxicity.
Nnyocha ndị ọzọ ekpughere na, post-ọgwụgwọ nke oxiracetam nwere ike ichebe oke site ischemic ọrịa strok site na-ebelata ọbara ụbụrụ mgbochi ọrụ.
Na nnyocha ụmụ mmadụ nke ndị ọrịa 140 na-arịa ọrịa strok n'ihi ọbara mgbali elu (ọbara mgbali), oxiracetam e ndinye tinyere a akpatụ akwara (NGF). Achọpụtara ọgwụgwọ a iji nyere ụbụrụ aka ịgbake ma nwekwaa ndụ. Ọmụmụ ihe ahụ kwukwara belata mbufụt na enwekwu ike ike nke bụ akara nke mgbake mgbe ụbụrụ mebiri.
iv. Emeziwanye ihe omuma
Oxiracetam na-emetụta ụzọ anyị si ahụ ihe site na uche ise nke ịhụ ụzọ, isi, aka, ịnụ ihe na ọbụna uto.
Mgbe ị na-ewere oxiracetam ọ na - eme ka ụbụrụ ụbụrụ na - erugharị nke na - enyere uche aka ịmata ma hazie yana ịkọwa ihe anyị ghọtara.
Nghọta mmetụ dị mma pụtara ime mkpebi ka mma n'ụzọ dị jụụ.
v. Mma na-aga were were n'ọnụ
E gosipụtara Oxiracetam iji mee ka ụbụrụ nwee ike ịrụ ọrụ ma nwee ike melite okwu ọnụ. Okwu ịsụ were were bụ otu n'ime akpịrị ọrụ na-enyere anyị aka weghachite ozi na ebe nchekwa gị.
N'ime nyocha nke mmadụ 73 na-ata ahụhụ site na ọtụtụ ọrịa nkwarụ (MID) ma ọ bụ isi mgbagha na-akpata nsogbu (PDD), a chọpụtara na oxiracetam iji gbochie ndapụta mmụọ na-eme ka okwu ha dịkwuo mma.
vi. Na-amụba anya
Mụrụ anya ma lekwasị anya dị mkpa maka ịrụ ọrụ kachasị mma. Oxiracetam na-enye mmetụta dị nro na-akpali akpali nke na-enyere gị aka ịmụrụ anya site na ịba ụba ọbara na ụbụrụ.
N'ime nyocha nke mmadụ 289 na-arịa ọrịa mgbaka, a hụrụ oxiracetam iji mee ka ọrụ ntụgharị uche dịkwuo elu. A kọkwara na ọ ga - eme ka nchekwube dịwanye elu ma na - ebelata nchekasị na ụjọ.
Oxiracetam ntụ ntụ: Otu esi eme ya?
Dabere na nnwale ule a na-atụ aro usoro ọgwụgwọ oxiracetam bụ 750-1,500 mg kwa ụbọchị. A na-eke usoro ọgwụ oxiracetam ụzọ abụọ na-ebute n'isi ụtụtụ na n'ehihie.
Kwesịrị izere ịnara mgbakwunye oxiracetam na mgbede n'ihi na ọ nwere mmetụta dị nro na-akpali akpali nke nwere ike imebi ụra gị.
Ebe ọ bụ na oxiracetam bụ mmiri soluble ọ nwere ike iwere ya n'ụdị mbadamba, capsule ma ọ bụ ọbụna ntụ ntụ, ma ọ bụ na-enweghị nri.
Nnyocha na-egosi na oxiracetam na-ewe ihe dị ka awa 1-3 iji ruo ogo ya kachasị elu na ọbara ma yabụ kwesiri iwere ya otu awa tupu ọrụ ebumnuche dịka ọrụ mmụta. Ọkara ndụ oxiracetam bụ ihe dị ka awa 8-10 ma ị kwesịrị ịtụ anya iru arụmọrụ kachasị elu n'otu izu.
Agbanyeghị, ụfọdụ ọmụmụ ejirila ọgwụ dị elu nke oxiracetam ruo ihe dị ka 2,400 mg kwa ụbọchị, na-amalite mgbe niile site na usoro dị ala kachasị dị ala karịa ka ọ dị mkpa.
Na mgbakwunye, ebe ọ bụ na oxiracetam na-eme ka arụmọrụ nke acetylcholine na-arụ ọrụ nke ọma na ụbụrụ, jide n'aka na ị ga-eji ezigbo choline mee ya Alpha GPC ma ọ bụ CDP choline. Nke a ga - enyere gị aka igbochi nsogbu ndị ọzọ na - akpata oxiracetam kpọmkwem isi ọwụwa n'ihi ezughị oke nke ụbụrụ.
A na-ewere Oxracetam nootropic dị ka ihe dị mma ma na-anabata ya nke ọma.
Otú ọ dị, ụfọdụ nsogbu ndị oxiracetam a kọọrọ gụnyere;
Isi ọwụwa - nke a na-eme mgbe mmadụ chefuru ịkwakọba oxiracetam na ezigbo isi iyi. Isi ọwụwa na-eme n'ihi ezughị ezu choline na ụbụrụ. Enwere ike izere nke a site na ịnara nchịkọta oxiracetam na isi iyi dị ka Alpha GPC.
Somrahụ ụra na erughị ala bụ mmetụta dị egwu oxiracetam dị obere. A na-akọ ha mgbe mmadụ na-ewere oke dị elu nke oxiracetam ma ọ bụ were mmeju ahụ na mgbede. Iji gbochie mmetụta ndị a na oxiracetam, na-ewere usoro onunu ogwu a tụrụ aro ma mee ka ọ bụrụ omume iji were oxiracetam tupu ehihie iji zere nsogbu ụra.
Fọdụ ndị ọzọ nwere ike oxiracetam mmetụta na-agụnye;
Ọbara mgbali elu,
Afọ ọsịsa ma ọ bụ afọ ntachi, na
Oxiracetam Stack Ndụmọdụ
Oxiracetam ntụ ntụ na-arụ ọrụ nke ọma iji mee ka cognition nwee ike ịkwalite usoro ụjọ nke etiti naanị ma ọ bụ na mgbakwunye na mgbakwunye ndị ọzọ.
-oxiracetam Alfa GPC nchịkọta
Dị nnọọ ka racetams ndị ọzọ, Oxiracetam tojupụtara na choline isi iyi dị ezigbo mkpa. Kwado ya na Alpha GPC ọ bụghị naanị na-ebuli mmetụta ya kamakwa ọ na-enyere aka igbochi ndapụta nke isi ọwụwa kachasị metụtara ụbụrụ nke ụbụrụ na ụbụrụ.
Ngwunye ogwu oxiracetam alpha GPC ga-abụ 750 mg nke oxiracetam na 150-300 mg nke Alpha GPC na-ewere na ọgwụ abụọ, n'ụtụtụ na n'ehihie.
-oxiracetam noopept nchịkọta
Noopept bụ otu n'ime ihe kacha mma nootropics a maara iji welie ọrụ nghọta na-arụ ọrụ nke ọma na racetams.
Mgbe ị tojupụtara oxiracetam na noopept, ị na-atụ anya inweta ahụmịhe arụ ọrụ gụnyere, na ebe nchekwa, mmụta, ịmụrụ anya, mkpali na ọbụna ilekwasị anya.
Standarddị usoro maka nchịkọta a ga-abụ 750 mg nke oxiracetam na 10-30 mg nke noopept, na-ewere kwa ụbọchị.
-unifiram oxiracetam nchịkọta
Unifiram bu nkpuru nootropic emere iji mee ka cognition nwekwuo ihe okike di ka nke racetams. Agbanyeghị, ọnwụnwa ụlọ ọgwụ adịghịzi na nke a na - eme ka o sie ike ịmata ihe ga - ejikọ ya nke ọma.
Ma ọzọ, ebe ọ na-arụ ọrụ yiri nke ahụ na racetams, uwe na-enweghị atụ na racetams gụnyere oxiracetam nwere ike ime ka arụ ọrụ nghọta ka mma. Egosiputara na odi ike karie racetams ma ya mere odi nkpa gha achota iji nweta oghom.
Dabere na nkwekọ onwe onye na nke oxiracetam, usoro onunu ogwu kwesiri ibu 5-10 mg nke edo edo na 750 mg nke oxiracetam kwa ubochi.
-Oxiracetam na Pramiracetam Stack
Oxiracetam mejupụtara racetams ndị ọzọ nke ọma.
Mgbe ị na-eji oxiracetam tojupụtara na pramiracetam, akpịrị arụ ọrụ nke ebe nchekwa, na-elekwasị anya na na-akpali na-ukwuu enwekwukwa na-arụpụtaghị gị nwere ike dịkwuo.
The nwayọọ stimulant mmetụta nke oxiracetam na-enwekwukwa si otú amụba amụ anya na ịta ruru ka mma echiche ike.
Ngwadogwu a tụrụ aro maka nchịkọta a bụ 750 mg nke oxiracetam na 300 mg nke pramiracetam were otu ugboro kwa ụbọchị. Enwere ike ị Oxụ Oxiracetam na afo efu ebe ọ bụ na mmiri nwere ike ịgbanye ya mgbe pramiracetam nwere ike tinye ya na nri mbụ ebe ọ bụ mgbakwunye mgbakwunye abụba.
Ebe ịzụta oxiracetam
Oxiracetam nootropic dị ngwa ntanetị. Ọ bụrụ n ’ịtụle ịnara oxiracetam zụta ya n’aka ndị na-ere ahịa nootropic a ma ama na ntanetị. Tụlee iji nlezianya na-amụ banyere ihe oxiracetam a kapịrị ọnụ, capsules ma ọ bụ mbadamba ụdị enyere.
Lele ahụmịhe oxiracetam na-akọrọ na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ ahụ bụ otu ụzọ iji kwe nkwa na ị nwetara ihe ị na-achọ.
Nyocha Oxiracetam na saịtị ndị na-ere ahịa bụ onye mepere anya nke kacha mma oxiracetam nootropics ebe ọ bụ na ọ bụghị ha niile ga-enye ngwaahịa dị elu.
Dysken, MW, Katz, R., Stallone, F., & Kuskowski, M. (1989). Oxiracetam na ọgwụgwọ nke ọtụtụ ọrịa infarct na isi mgbagha degenerative. The Journal of neuropsychiatry na-agwọ ọrịa neurosciences, 1(3), 249-252.
Hlinák Z, Krejcí I. (2005). Oxiracetam tupu oge ọgwụgwọ emee ka ọ ghara igbochi nkwanye ùgwù mmekọrịta ọha na eze mepụtara na trimethyltin na oke. Behav Brain Res.
Huang L, Shang E, Fan W, Li X, Li B, Ọ S, Fu Y, Zhang Y, Li Y, Fang W. (2017). S-oxiracetam na-echebe megide ọrịa strok site na ibelata ụbụrụ mgbochi ụbụrụ na-adịghị mma na ụmụ oke. Eur J Pharm Sci.
Maina, G., Fiori, L., Torta, R., Fagiani, MB, Ravizza, L., Bonavita, E., Ghiazza, B., Teruzzi, F., Zagnoni, PG, & Ferrario, E. (1989 ). Oxiracetam na ọgwụgwọ nke isi mmebi na ọnụọgụ ọnụọgụ ọnya: ọnụọgụ abụọ, nyocha a na-achịkwa ebebo. Neuropsychobiology, 21(3), 141-145.
Rozzini R, Zanetti O, Bianchetti A. (1992). Rụ ọrụ nke ọgwụgwọ oxiracetam na ọgwụgwọ nke adịghị ike nghọta nke abụọ na-akpata isi mgbaka.
Anyanwụ, Y., Xu, B., & Zhang, Q. (2018). Ihe na-akpata akwara na Oxiracetam na ọgwụgwọ ọrịa ọbara ọgbụgba Hypertensive. Akwụkwọ akụkọ Pakistan nke sayensị ọgwụ, 34(1), 73-77.
1.What bụ Oxiracetam?
2.Oxiracetam ntụ ntụ: Gini ka eji eme ihe eji eme ihe?
3.Oxiracetam: Kedu ka O si arụ ọrụ?
4.Oxiracetam mmetụta & Uru
5.Oxiracetam ntụ ntụ: Otu esi eme ya?
7.Oxiracetam Stack Ndụmọdụ
8.Ebe ịzụta oxiracetam